ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင် - ရှန်ဟိုင်း Mutong ကစားစရာ Co. , Ltd မှ
သံမဏိ splash pads
မိုးလုံလေလုံ Trampoline ပန်းခြံ
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအလုပ်မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပအပန်းဖြေပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်အလေးပေးသောထုတ်ကုန် system ကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပြီး, ဆိုးခံတပ်နှင့်ချဲ့ထွင်မှုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဆလိုက်များနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပန်းခြံများ, နှင့်ရပ်ရွာ facilities.We ၏ပေါင်းစပ်များအတွက်အမျိုးမျိုးသောအရည်အသွေးမြင့်မားအပန်းဖြေပစ္စည်းကိရိယာများဖန်တီး customers.Our ထုတ်ကုန်ကိုအောင်မြင်စွာဥရောပ, ရုရှား, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အရှေ့တောင်အာရှနှင့်အာဖရိကနဲ့တူ 20 ကျော်နိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှတင်ပို့ခဲ့ကြ, etc.and ဖောက်သည်တွေအများကြီးယုံကြည်စိတ်ချနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ products.Strong အစွမ်းသတ္တိကိုချီးကျူးထောပနာ, စက်မှုဇုန်အဆင့်မြှင့်
ကျနော်တို့မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပအပန်းဖြေပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများထုတ်လုပ်ရန် unremitting အားထုတ်မှုအောင်ဆုံးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနေကြသည်အတွေ့အကြုံ 15 နှစ်ရှိသည်, လုံခြုံမှုအရှိဆုံးအပန်းဖြေ equipment.Today, နိုင်ငံတကာစျေးကွက်နှင့်စားသုံးသူ ပို. ပို. ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုအပ်နှင့် အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များလိုအပ်ချက်, ကြှနျုပျတို့ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာကာကွယ်မှုနည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏နံပါတ်မိတ်ဆက်နှင့်အနောက်နိုင်ငံများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်ဦးဆောင်ဦးရွက်နည်းပညာပေါင်းစည်းနှင့်ခေတ်သစ် facilities.Having နှင့်အတူချုပ်ခြင်းနှင့်အချပ်များနှင့်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်အရောင်မှပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးမျိုး, ရိုးရှင်းသောတဲ့ operating ပလက်ဖောင်း နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုဂ္ဂိုလ်များ, Mu Tong က high-tech ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများရှိနိုင်ပါသည်နှင့်အစဉ်မပြတ်တညျဆောကျခဲ့ကြရသောပိုပြီးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းလုံခြုံမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုသေချာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်စက်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်လိုက်စားများအတွက်ထူးချွန်စွမ်းဆောင်ရည်, ။
MuTong ကြောင့်လည်းအသစ်တခုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု path.Strategic ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စိတ်ကြိုက်အပေါ်သွားကြဖို့ခေတ်သစ်ထုတ်လုပ်မှု၏အံ့ဖွယ်အဖနျတီးနိုငျသောလောကဓာတ်မှသက်သေပြခဲ့သည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကွင်းဆက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်အတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည်ဖောက်သည်၏ထုတ်ကုန်ဖို့တပြင်လုံးကိုနည်းပညာခြေရာခံခြင်းဝန်ဆောင်မှုထွက်သယ်ဆောင်ရန်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးခြုံငုံဖြေရှင်းချက်များကိုမြင်သာထင်သာအကျိုးခံစားခွင့်, High-အရည်အသွေး, ထိရောက်ဝန်ဆောင်မှု concept ကိုမှလိုက်နာစောင့်ထိန်းအမြဲ MuTong.It ၏မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ် ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့် pre-ရောင်းအားဒီဇိုင်းဌာနအဆိုအရဖောက်သည်များ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီတစ်ဦးအသေးစိတ်ဘတ်ဂျက်ထုတ်ဆောင်ရွက်မည်နှင့်ရောင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဌာနဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်အရသိရသည်ပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်လုပ်မှု၏ဒီဇိုင်းကိုစီစဉ်မည်အကြောင်း, အဆိုပါအင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းဆောက်လုပ်ရေးသဘောတူညီချက်အညီထုတ်ကုန် install လုပ်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်အပြီး-ရောင်းချပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု်ထမ်းလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုကူညီပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်နီယာများရှိပါတယ်လိမ့်မယ်။
အတှေ့အကွုံတဆယ်ငါးနှစ် MuTong စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဤလိုင်းအတွက်ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍမှနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပအပန်းဖြေပစ္စည်းကိရိယာများအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု "လေယာဉ်တင်သင်္ဘော" ကိုဖန်တီးရန်နှင့်အိမ်တွင်အများအပြားကျော်ကြားသောမြို့ကြီးများနှင့်သာယာလှပအစက်အပြောက်အတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်၏လောကဓာတ်တည်ဆောက်ရန်ကို သူတို့ကို abroad.Among, က "သားသမီးရဲ့ပရဒိသု" စီမံကိန်း Zhejiang Wenling နှင့်အဏ္ဏဝါ Suzhou ရှီ Lan DE ၏အပန်းဖြေပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဒါပေါ်နှင့်စတုရန်းနှင့် Jiangsu Shengze ၏ Fortune မဂ္ဂဇင်းပလာဇာစွန့်စားမှုများနှင့်အခြားဟန်ကျိုးကာလ၏ဝါယာကြိုးကြိုး extension ကိုသုံးစက်ကိရိယာများကို ASD သားသမီးရဲ့ကစားကွင်းလည်းပါဝင်သည် အဆိုပါစွန့်စားမှု park.In များအပြင်နဲ့တူလူသိများတဲ့စီးပွားဖြစ်ဧရိယာ, Ningbo နှင့်ပြင်ပ Daqing Heilongjiang ၏ Longfeng Wetlands ပန်းခြံ၏ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်သီချင်း Jia Cheng Shou ရှီ HU.Brand အာမခံချက်၏အဆောက်အဦးအပြင်ကစားကွင်းအားကစားအပန်းဖြေပန်းခြံ၏ပြင်ပတွင်ဝါယာကြိုးကြိုး extension များ, ရှိပါတယ် နှင့် strength.MUTONG ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဟာအမျှထိုသို့အသစ်တစ်ခုကိုစတိုင်ကလေးအပန်းဖြေကစားစရာ facilities.International လက်မှတ်နှင့်ဂုဏ်ပြုဆုများညီပိုင်ဆိုင် created တရုတ်အားကစားကုန်စည်အဖွဲ့ချုပ်နှင့်တရုတ် Toy အသင်းမှအဖွဲ့ဝင် MUTONG အရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှု၏အသိအမြင်အားကောင်းလာစေရန်နှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအရှိဆုံးတင်းကြပ်စံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ISO ၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူထုတ်လုပ်ရန်မှကပ်ထားပြီးအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ထုတ်ကုန် ISO9001 အမျိုးသားရေးအရည်အသွေးကိုစနစ်ကလက်မှတ်များမှာ နှင့် ISO14001 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစနစ်ကလက်မှတ်နှင့်နိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင်ကျန်းမာရေးစနစ် OHSAS လက်မှတ်နှင့်အီးလက်မှတ်အတည်ပြုချက်များနှင့်လုံခြုံရေးအရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အထူထောင်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏လူအာမခံကုမ္ပဏီများကအာမခံထားခဲ့သောဆောင်ရွက်မှုများ, ကာကှယျစောငျ့ရှောကျခဲ့သညျ။
နှစ်တွေ MuTong အရည်အသွေး၏ 3,15 အမျိုးသားသမာဓိ Enterprises နှင့် AAA ဆန္ဒပြယူနစ်, ဂုဏ်သတင်း, တရုတ်နှင့်တရုတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့အများအပြားဂုဏ်ထူးရရှိထားသူများနှင့်တရုတ်နာမည်ကြီး Brand.MuTong လုပ်ထိုးဖောက် Continues နှင့်အသစ်အောင်မြင်မှုများရယူနှင့်အများဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်လာခဲ့သည် မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပအပန်းဖြေလုပ်ငန်းများထုတ်လုပ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ခိုင်ခံ့သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုနှင့်အတူတစ်အမှတ်တံဆိပ်။
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုနှင့်အတူဂုဏ်သတင်းကိုဖန်တီးရန်နှင့်အမျိုးသားပြန်လည် brand.MUTONG ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ခေတ်သစ်တစ်ခုဖန်တီးပရော်ဖက်ရှင်နယ် strength.To နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ status တည်စေရန်ဈေးကွက်နှင့်ကမ္ဘာ့အောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာတွင်ကျော်ကြားအမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ကာကျန်းမာပြီးအန္တရာယ်ကင်းဖျော်ဖြေရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ် န့်အသတ်လတ်ဆတ်သောအတွေးအခေါ်များနှင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာသားသမီးရဲ့ကစားကွင်း၏ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ရှေ့ပြေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
နေရပ်လိပ်စာ: မရှိပါ။ 9046, Songjin လမ်း, Songjiang ခရိုင်, ရှန်ဟိုင်း, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အီးမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။